ရွေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ရွေး
Posted by ငွက္ကေလး on Apr 8, 2013 in Drama, Essays.. | 16 comments
ဒီနေ့အပြင်သွားစရာရှိသည်။ ရေချိုးပြီး အဝတ်အစားလဲရန် ဗီရိုကိုဖွင့်လိုက်သည်။
`အင်း၊ ဘာအင်္ကျ ီဝတ်ရပါ့´ ရွေးချယ်စရာ အင်္ကျီနှစ်ထည်၊ သုံးထည်ရှိနေသည်။ `ဒီအဖြူလေးပဲဝတ်လိုက်တော့မယ်၊ အသားလည်းအေးတယ်၊ ဘောင်းဘီ အမဲနဲ့ လိုက်မယ်´
တံခါးဝအရောက်စဉ်းစားပြန်သည်၊ `ဘာဖိနပ်ဝတ်ရမလဲ ??´ ကတ္တီပါဖိနပ်တစ်ရံ နှင့် တရုတ်ဖြစ် ခြေညှပ်ဖိနပ် တစ်ရံ ရှိနေသည်။ `ဒီရိုးရိုးခြေညှပ်လေးပဲကောင်းပါတယ်၊ ကတ္တီပါက ခြေဆီထွက်ရင် နံတတ်တယ်´
တစ်ခါတစ်ရံ ရွေးချယ်စရာများက ကျွန်တော်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အခိုက်အတန့် တွေဝေစေသည်။ ရွေးချယ်စရာများရှိခြင်းက အကောင်းဆုံးကို ရွေးချယ်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးဖြစ်သော်လည်း၊ ကျွန်တော်တို့ ရရှိသည့် ရွေးစရာတွေထဲမှာ အကောင်းဆုံးတွေပါချင်မှလည်းပါနိုင်သည်။ ဒီတော့ ရှိတဲ့အထဲက သင့်တာလေး ရွေးလိုက်ရသည့် သဘောလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်လိုက်ရသည်ဆိုတိုင်း အကောင်းဆုံးတွေ ဟုတ်ချင်မှလည်း ဟုတ်လိမ့်မည်။
`ကားတွေကလည်း ကျပ်လိုက်တာ၊ ဒီအချိန်ဒီလိုပါပဲ ကားရွေးနေရင် ကြာတယ်၊ တွေ့တဲ့ကားပဲ တက်စီးတော့မယ်´
၄၈ ပေါ်ပြေးတက်လိုက်သည်၊ နေရာတော့မရှိ၊ အနောက်ဖက်ကို ကျော်ဝင်လိုက်ပြီး၊ လက်ကိုင်ကွင်းကို ကိုင်ရင်း မတ်တပ်ရပ်နေလိုက်သည်။
ခဏကြာတော့ ရပ်နေတဲ့ နေရာရှေ့က လူတစ်ယောက်ထသွားသဖြင့် ထိုင်ခုံတစ်နေရာလွတ်သွားသည်၊ သုံးယောက်တန်းမှာ အစွန်ဘက်၊ အဲ့ဒီသုံးယောက်တန်းတွေက သိတဲ့အတိုင်း ထိုင်ရတာတော့ ကပ်သီးကပ်သပ်နိုင်လှသည်။ သို့သော် နေရာရွေးစရာမရှိသဖြင့် ဝင်ထိုင်ဖြစ်သည်။ ထုံးစံအတိုင်း ဘေးသို့မကျသွားရန် ခြေထောက် တစ်ဖက်က အောက်ကို ကန်ထားရသေးသည်။
ရွေးချယ်စရာမရှိခြင်းက ကျွန်တော်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တွေဝေရန်မလို၊ တစ်ခုပဲတွေ့ တစ်ခုပဲရှိ၊ ဒါကြောင့် အဲ့တစ်ခုကိုပဲ ရွေးချယ်ရလိမ့်မည်။ အဲ့တစ်ခုက သင်နှင့်သင့်တော်သော၊ သင့်စိတ်ကြိုက်ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မည်၊ ဒါပေမဲ့ ရွေးစရာတစ်ခုပဲရှိသဖြင့် ရွေးလိုက်ရသည်။ ကောင်းလျှင်စံ၊ မကောင်းလျှင်ခံပေါ့။
`လက်ကလေးတွေဖြုတ်၊ အောက်ကြည့်ဆင်း၊ ဆင်းနေတုန်း၊ ဆင်းနေတုန်း၊ ရပြီ … မောင်း …´
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲ လှမ်းဝင်လိုက်သည်။ ချိန်းထားတဲ့သူမလာသေး။
`နက်စ် ပလိန်းတစ်ခွက်လောက်၊ ပြီးတော့ အီကြာကွေးရှိသေးလား´
`အီကြာကွေး ကုန်သွားပြီ အစ်ကို၊ ပဲပလာတာ၊ နန်းကြီးသုပ်၊ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ ……….. ´
`ရပြီ၊ ရပြီ အဲ့ဒါတွေမစားချင်ဘူး၊ နက်စ် ပလိန်းပဲ ပေးတော့´
ရွေးချယ်စရာများရှိနေပြန်သော်လည်း မရွေးချယ်ခြင်းက ကျွန်တော်တို့၏ အခွင့်အရေးပင်၊ တစ်ခါတစ်ရံ ဘာကိုမှ မရွေးချယ်ပဲလည်း နေနိုင်သည်၊ ဒါတောင်မှ ဘာမှမရွေးဘူး ဆိုတာကို ရွေးလိုက်ရခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ သို့ပေမဲ့ အဲ့လိုအခွင့်အရေးကလည်း အမြဲမရနိုင်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကံကြမ္မာက တစ်ခါတစ်ရံ ဘာကိုမှမရွေးခွင့်ကို အချိန်တိုင်း ပေးမထားပြန်ချေ။ ထို့ကြောင့်ပင် ကျွန်တော်တို့ နေစဉ်တိုင်း ရွေးရင်း ရွေးရင်းနှင့် သံသရာ လည်နေရသည်။
`အင်း၊ အစ်ကို လာ … ထိုင်၊ ဘာသောက်မလဲ ………´
စားပွဲထိုး ကောင်လေးကို လှမ်းခေါ်လိုက်သည်
ကျွန်တော်တို့ စကားပြောနေစဉ် ကောင်မလေး ခပ်ငယ်ငယ်တစ်ယောက် ဘေးမှာလာရပ်သည်၊ ပါးစပ်ကတော့ တိုးတိုး တိုးတိုးနဲ့ ဘာတွေပြောနေမှန်းမသိ၊ အဓိပ္ပာယ်ကတော့ ပိုက်ဆံတောင်းတာ။ ကျွန်တော်သူ့ကို ခေါင်းခါပြလိုက်တော့ တခြားဝိုင်းကိုရောက်သွားသည်။
`မိဘတွေကလည်းဗျာ၊ သန်သန်မာမာကြီးတွေနဲ့ သားသမီးတွေကို ခိုင်း ခိုင်းရက်တယ်´
`သူ့တို့ခမြာလည်း မိဘတွေကို ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မှ မရှိပဲကိုးကွ´
`အင်းပေါ့လေ၊ မိဘတွေကလည်း သားသမီးကို ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါဘူး၊ ကိုယ်မွေးတဲ့ ခလေး တစ်ခုခုချွတ်ယွင်း နေရင်လည်း ကျွေးရမွေးရ၊ စောက်ရှောက်ရတာပဲ´
တစ်ခါတစ်လေတော့ လောကကြီးမှာ ကျွန်တော်တို့တွေဘာကိုမှ ရွေးချယ်ခွင့်မရကြ။ ကံကြမ္မာက သူ့စိတ်ကြိုက်အကွက်တွေကို ရွှေ့ချင်ရွှေ့သွားတက်သည်။ သူရွေးချယ်ပေးသည့် နောက်ကို ကျွန်တော်တို့လိုက်ရသည့် အခါတွေလည်းရှိသည်။
လူသားတွေ ပညာတွေသင်ကြသည်၊ အမှားအမှန်တွေ ရွေးချယ်ကြသည်။ ဗဟုသုတတွေများလာတော့ အကောင်းအဆိုးကို ခွဲခြားကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ရွေးချယ်လိုက်သည့် အမှတ်တမဲ့ ရွေးချယ်မှု့တွေက ဘဝအတွက် အမှတ်တရအမှားလေးတွေ၊ အမှားကြီးတွေကိုလည်း ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိနေသည်။ ဘဝကိုသက်ရောက်မှု့ ပြင်းထန်တက်သည်။ သတိထားသင့်သည့်အရာပင်။ နေ့စဉ်ရွေးချယ်မှု့တွေနှင့် ထိတွေ့နေပြီး၊ အကျင့်ဖြစ်နေသော်လည်း၊ အရေးကြုံလာပြန်တော့ ရွေးရခက်နေတက်သေးသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက ရွေးချယ်မှု့တွေနဲ့ ဘော်ဒါတွေဖြစ်နေလေပြီ။
ဘာစားရလဲ၊ ဘယ်ဖုန်းလေးဝယ်ရပါ့၊ ဘယ်နေရာမှထိုင်ရပါ့၊ ဘာအရောင်လေးဝတ်ရင်ကောင်းမလဲ၊ ဘယ်သူ့ကို အဖြေပြန်ပေးရမလဲ၊ သူ့ကို ဘာလက်ဆောင်ပေးရင် ကောင်းမလဲ၊ ဘယ်သွားရပါ့ …… ??? ရွေးချယ်မှု့ အတွက် ဒွိဟတွေနဲ့ နေ့စဉ်ရှင်သန်နေသည်။
နေ့စဉ်ရှင်သန်နေရင်း ရွေးချယ်စရာတွေကနေ လွတ်ကင်းခွင့်မရှိ၊ အမြဲတမ်းရွေးနေရဦးမည်။
ဘယ်ဟာကိုရွေးသင့် မရွေးသင့်၊ ဘာကိုမှ မရွေးပဲနေသင့် မနေသင့် စဉ်းစားရမည်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မရွေးလိုက်ရပဲ ဖြစ်လာသည့် အခြေအနေတွေက အနာဂါတ်ရွေးချယ်မှု့တွေအတွက် အတွေ့အကြုံများလည်း ဖြစ်လာနိုင်သည်။
ကျွန်တော်၏ ရွေးချယ်မှု့များလည်း အမြဲမှန်နေချင်သလို၊ သင်၏ရွေးချယ်မှု့များလည်း အမြဲမှန်ကန်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်။ သို့သော်လည်း အနိစ္စ အမြဲမရှိဆိုတော့ ရွေးချယ်မှု့တွေလည်း အမြဲ မမှန်နိုင်ဘူးလေ။
မနက်အိပ်ယာထပြီးလို ့မျက်နှာသစ် သွားတိုက် ရေချိုးပြီးတိုင်း
မနက်စာ ဘာစားရင်ကောင်းမလဲ လို ့ရွေးရတာ ပိုခက်သလိုပဲ
ဟို တစ်ယောက်လား ဒီတစ်ယောက်လား ရွေးရခက်တယ်ကွယ် အကြွေးပေးဖို့ ပြောတာပါ ဘယ်သူ့အရင်ပေးရကောင်းမလဲလို့
ဒါလေးကိုဖတ်ရင်း ကိုယ့်ဘဝအတွက်ကိုယ် မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုလုပ်နိုင်ပါစေလို့ ကိုယ့်ဘာသာပဲဆုတောင်းလိုက်တယ် … (ကြိုက်တယ်ဂျာ)
ဟုတ်တယ် မှန်တယ် ထင်ရင် ရွေးလိုက်တာပဲ ….
ရွေးပြီးမှ မှားသွားတာတော့ ကိုယ့်ကုသိုလ်ပေါ့ …
အိုးကောင်း ရွေး အိုးကွဲ ရ။
ရွေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စကားပုံ တွေ ဆက် ရေး မလို့ တခု တည်း ရ တော့ တယ်။
ရွေးလွန်းလျှင်လည်း ………….။ အဲ လို မေ့ တတ်တာ။
မ…ရွေးးးးးးးးးးးးးးးးးး….စားချင်တယ်။ ဒါနဲ့ စားပွဲထိုးခေါ်သံကြီးကလည်း ကျောက်ဆရာ ပြွတ်ပြွတ် တဲ့
ရွေးချယ်မှုဆိုတာ လူသားတွေ အများဆုံး လုပ်နေတဲ့အရာ
ရွေးချယ်မှုဆိုတာ နေ့စဉ် ပြုမိနေတဲ့အရာ
ရွေးချယ်မှုဆိုတာ တစ်ခါတစ်ခါလဲ မှားတတ်ပြန်တဲ့အရာ
ရွေးချယ်မှုဆိုတာ ပြင်လို့ရတတ်သလို အတည်လဲ ဖြစ်သွားတတ်တဲ့အရာ
ဒါပေသိ အမှားတွေကိုဘဲ ရွေးနေမိပြန်တယ် ။
တခါတလေ ရွေးချယ်စရာရှိတာက လူကို တွေဝေစေနိုင်တယ်။
အဲဒါကြောင့် တစ်ခုခုကို ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်ခိုင်မာမာချပြီး …
ငုတ်မိသဲတိုင် တက်နိုင်ဖျားရောက် နောက်မဆုတ်တမ်း လုပ်ဖို့
ဘုရင်နောင် ဖောင်ဖျက်ခဲ့တာဖြစ်မယ်။ :hee:
ရွေးချယ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နည်းနည်းလေး ပြောချင်ပါတယ် …
မနက် ရုံးအသွား ဘတ်စ်ကား စီးရတဲ့အခါမျိုးမှာ
အထက်မှာ ပြောထားသလိုပါပဲ …
တစ်ခုပဲ ရှိလို့ တစ်ခုပဲ ရွေး တစ်ခုပဲ ယူဆိုသလိုပေါ့ …
ဒီနေရာမှာ အပြိုင်အဆိုင် ရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့ …
အင်းး ကိုယ့်စိတ်ပေါ် မူတည်တာပေါ့ ….
ဘတ်စ်ကားတွေ နည်းနည်း ချောင်တဲ့အချိန်မှာ စီးတယ်ဆိုပါစို့ …
ထိုင်ခုံတွေက အများကြီးပဲ …
ဒီအချိန် ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်
ပြတင်းပေါက်ဘေး ခုံကို အရင်ကြည့်ပြီး ရွေးထိုင်တတ်တယ် ..
ပြတင်းပေါက်ဘေး အဲ့ဒီခုံ မရရင်လည်း ထသွားလောက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘေးမှာ ထိုင်တယ် ..
နေပူ နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ နေရိပ်ဘက်ကို ဦးစားပေး ရွေးမယ်ပေါ့ …
ဘဝမှာ ရွေးချယ်စရာတွေက တစ်ပုံတစ်ပင်ပါ …
အချို့မှာတော့ ရွေးချယ်စရာတွေ နည်းတာပေါ့ …
အချို့ဆို မရှိသလောက်ပါပဲ …
ရွေးချယ်ရတိုင်းမှာလည်းပဲ တွေဝေတယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူးရယ် …
အကောင်းဆုံး ဖြစ်မယ့်ဟာကို ရွေးချယ်ချင်တာမျိုးပေါ့ …
လူတွေဟာ များသောအားဖြင့် အကောင်းဆုံးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြတယ် …
ဒါမယ့် .. ရွေးချယ်ခွင့် မရှိတဲ့ အခါမှာလည်း ဖြစ်သလို နေတတ်ကြတယ် …
ဥပမာ … ကျနော်က ကွမ်းစားတယ် …
မလေး ရောက်စက ကွမ်းကို ဘယ်မှာ ဝယ်ရမှန်း မသိဘူး … ရှိမယ်လည်း မထင်ဘူး ..
ဒါနဲ့ မစားဖြစ်တော့ဘူး … မစားလည်း ရတာပဲရယ် ..
အဲ .. ဘာတွေ ပြောမိသွားတာလဲ မသိဘူး ….
ပြန်တော့ မဖျက်တော့ပါဘူး ….
ဒီတော့ကာ ဒါပါဘဲလို့ …
အံစာအတုံးပြောတာကို နည်းနည်းဝင် ပတ်သတ်ကြည့်မယ်ဗျာ..
အဲဒိ ဘက်စ်ကားစီးတဲ့ ကိစ္စမျိုးကျတော့ ရွေးချယ် တာ မချယ်တာနဲ့ ဆိုင်တယ်ဆိုတာထက် .. လူ့အလို ဆိုတာကိုပြောချင်တယ်ထင်တာပဲဗျ..
လူတွေရဲ့ အလိုက ဘယ်တော့မှ အတော မသတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကို ညွှန်းချင်တာပေါ့ဗျာ.
ခြေတစ်ဖက်လေးနဲ့ပဲ တွယ်ပြီးလိုက်ရလိုက်ရ.. ဟော….လိုက်ရတော့ လည်း .. ခြေထောက်နောက်တဖက် ချလို့ရအောင် ကြိုးစားရ .. အဲဒိက နေ နောက် လှေကားတထစ်..နောက် .. ကားပေါ်ရောက်.. နောက်ထိုင်ခုံရ.. နောက်.. ပြတင်းပေါက်နားရောက်.. အဲဒါတွေက လူ့အလိုလောဘတွေ ထင်လို့ အံစာအတုံးအောက်မှာ ဝင်မန့်ကြည့်တာပါ.. ဒါပါပဲ.. အဟဲ
“ရလေ လိုလေ ..
အိုတစ္ဆော ..” ဆိုဒလိုပေါ့ ခညာ ….
“ပလိုင်းပေါက်နဲ့ ဖားကောက် ..”
ဆိုသလိုပေါ့ ခညာ …
ဟုတ်ဒယ်ဂျာ .. အူးရေး လူဂလေး ပေါဒလိုဘဲ မှတ်ဂျဘာ ..
ငှက်ကလေး တွေးသလို တွေးဖူးလို့ နားလည် လက်ခံပါတယ်..
ရွေးချယ်စရာများခဲ့လို့ ကောင်းတယ် ဆိုတာတွေကို လက်လွှတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်.
ရွေးချယ်လို့မရပေမယ့်လည်း လက်ရှိဘဝရဲ့ မိဘနဲ့ မိသားစု မောင်နှမအားလုံးကို ကျေနပ်ပါတယ်…
ရွေးချယ်လို့ရနိုင်ပါရဲ့နဲ့ မရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ အရာလေးတွေကိုလည်း လွမ်းဆွတ်မိပါတယ်.
ဒါပဲလုပ်ရမယ် ဆိုတဲ့ ရွေးချယ်စရာမရှိတဲ့ အခြေအနေမျိုးကိုလည်း ခဏခဏကို ကြုံနေရပါတော့တယ်. .
ှုအတွေးချင်း တိုက်ဆိုင်လို့“ ရွေး” ကိုကြိုက်တယ်ဗျာ..
ငိငိ … လူကလေးအရွေးမမှန်တာတစ်ခုတော့ ဝမ်းနည်းသဗျာ
ငယ်ငယ်တုန်းက စိုင်းထီးဆိုင်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ကြိုက်မိတယ်..
ပလက်ဖေါင်းမင်းသား ဆိုတာ ကိုပေါ့..။
အဲဒီထဲက တပိုဒ်က –
ရွေးနေရအောင် မင်းက ဘာကောင်လဲ……
အဲဒီစာသား ကြားကာစက ရင်ထဲနဲနဲအောင့်တယ်…
နောင် နှစ်တော်တော်ကြာမှ အလိုလို နားလည်လက်ခံလာမိတယ်…။